စွမ်းရည်:700~ 800kg / h
နည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, ကြက်အစာကျွေးခြင်းစက် စျေးကွက်အသစ်စက်တွေအကြားဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူတူသောအမျိုးမျိုးသောတိရစ္ဆာန်များအတွက်လုံးလေးများလုပ်နေကြသည် ငါး, သိုး, တိရစ္ဆာန်များ, ကြက်, ယုန်, ကြက်သား, ဘဲ, ဒိန်ခဲ, အခြားသူများအကြား Geese. စက်သည်အချင်း ၂ မီလီမီတာမှ ၈ မီလီမီတာအထိရှိသောအလုံးလေးများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်. ၎င်းသည်တစ်နာရီလျှင် ၈၀၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်. ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက် ၀ ယ်လိုအားပေါ် မူတည်၍ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်. တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်စျေးကွက်ရှိအသေးစားလယ်သမားများအတွက်စက်နှင့်သူတို့ရှိသည့်ငွေပမာဏအနည်းငယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သောကြောင့်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းတယ်: ကြက်အစာကျွေးရန်စက်သည်လူများစွာကိုလည်ပတ်ရန်မလိုအပ်ပါ. တကယ်တော့, ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်လူတစ် ဦး နှစ် ဦး သာလိုအပ်သည်. ဤသည်ကထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာလျော့ကျစေသည်. ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နိမ့်ခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းတိုးပွားစေသည်.
တပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချ: ကြက်သားအစာကျွေးခြင်းစက်သည်ရိုးရိုးလေး ဖြစ်၍ သေးငယ်သောကြောင့်၎င်းကို ၀ ယ်ယူတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုစုစည်းရန်သင်မိနစ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်. ၎င်းသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများကိုခေါ်ယူရန်လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုလျော့နည်းစေသည်. သူ့ကိုကူညီရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်အခြားတစ် ဦး သာလိုအပ်သည်.
ဒါဟာအနိမ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစက်ပါပဲ: ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့်, တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်aရိယာအနည်းငယ်လိုအပ်သည်. ၎င်းသည်ကြီးမားသောiringရိယာငှားရမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောအချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်.
ကျယ်ပြန့် application ကိုရှိပါတယ်: ကြက်ဘဲအစာစက်သည်အမျိုးမျိုးသောကြက်၊ မွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်လုံးလေးများထုတ်လုပ်နိုင်သည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးကိုစက်တစ်ခုတည်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းကျွေးမွေးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်. ကြက်ဘဲအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်လယ်သမားများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ခြံများတွင်တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်.
တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်စက် အစောပိုင်းကရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့သေးငယ်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းရှုပ်ထွေးစက်ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည် pellets ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နားလည်ရန်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်. ကန ဦး လုပ်ငန်းစဉ်သည်လုံးလေးများပြုလုပ်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်. ဤရွေ့ကားပဲပုပ်မုန့်ညက်ပါဝင်သည်, ပြောင်းဖူး၊, အခြားသူတွေအကြားဗီတာမင်.
ဤသည်အစေ့ကြီးများအားလုံးကိုအမှုန့်ပုံစံများအဖြစ်ကြေမွစေရန်သေချာစေရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်. ကြက်သားအစာကြိတ်တွင်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုကြိတ်ခွဲရန်ရည်ရွယ်ထားသည်. ပြောင်းဖူးအစားအစာများ, broomcorn, ဂျုံ, ပဲ, ဆီစာမုန့်ညက်, ပဲပုပ်မုန့်ညက်သည်ကြီးမားသောကောက်ပဲသီးနှံများဖြစ်သည့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွန်မြောက်ရမည်. သူတို့ကိုကြိတ်ခွဲစက်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူတို့သည်အမှုန့်များအဖြစ်ကြေမွသွားကြသည်. ဒီဖြစ်စဉ်မရှိရင်, ဒါကြောင့်လုံးလေးများလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖို့လာမယ့်ဖြစ်လိမ့်မယ်.
pelletizing system တွင်ကြက်၊. ဤသည် feed feed ကွက်နှိပ်နှင့်လုံးလေးများဖွဲ့စည်းရန်ရည်ရွယ်သည်. ဤတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်လုံးလေးများကိုအရွယ်အစားသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်. ၎င်းတို့တွင်တူညီသောအချင်းနှင့်အရှည်တို့ပါဝင်သည်. ကြက်အစာကျွေးခြင်းစက်သည်တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးအတွက်လိုအပ်သောအရွယ်အစားကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အစာကျွေးနေစဉ်အမှိုက်များကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။.